Prof. Jawaari oo ku baaqay in xukuumada cusub ee la sugayo ay noqoto mid ku dhisan wada-shaqayn – Radio Daljir
Prof. Jawaari oo ku baaqay in xukuumada cusub ee la sugayo ay noqoto mid ku dhisan wada-shaqayn
Diseembar 25, 2013 2:11 b 0
Muqdisho, December 25, 2013 – Gudoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheikh Cismaan jawaari ayaa ugu baaqay ra?isal wasaaraha Dr. Cabdiweli Sheikh in xukuumadiisu noqoto mid ku dhisan wada-shaqayn, si horumar buuxa looga gaaro hiigsiga dowladda.
Prof. Jawaari ayaa xusay in dowladda cusub looga fadhiyo inay abuurto mashariic fara badan si dhalintu shaqo u hesho isla markaasna looga gudbo dhibaatooyinka jira, wuxuu ku celceliyey in amniga iyo xasiloonida mar kasta ahmiyada koowaad la siiyo.
?Dowladda ha abuurto mashaariic dhinaca horumarinta ah oo ay hugaaminayaan shacabka Soomaaliyeed, waa taas mida looga fadhiyo dowladda.? Ayuu yiri Prof. Maxamed Sheikh Cismaan.
Prof. Jawaari wuxuu ku baaqay in laga gudbo qabiilka oo dadku ahmiyada siiyaan hanaanka Qarannimo ee dalka lagu hagi karo.
Baarlamanka federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan bilaabay olole lagu dhegaysanyo guuxa shacabka gaar ahaan kuwa Muqdisho si loogu tusaale qaato baahida dadka, baarlamanka oo ah gollaha sharci dejinta ayaa looga fadhiya howlo badan oo ay ku jirto dib u eegista dastuurka KMG ah.
Dowladda federaalka oo qiimayn ku samaynaysa khasaaraha colaadii ka dhacday gobolka Hiiraan